Ny mpampitohy ny fantsom-peo Mampihena ny Hex Nipple
Ny fantsom-by vy malemy mora kokoa dia mora kokoa amin'ny kilasy 150 # sy 300 # fanerena. Natao ho an'ny indostrialy maivana sy ny fampiasana plumbing hatramin'ny 300 psi izy ireo. Ny fantsom-baravarana sasany toy ny flange gorodona, taty aoriana, ny tee an-dalambe ary ny teatra amin'ny bullhead dia tsy mahazatra amin'ny vy vita.
Gi Hex Nipple kalitao mampifandray ny fatorana vita amin'ny lahy
Fantsona fantsom-bolo mainty Galvanized
Vato fantsom-bolo Galvanized
Vy vita amin'ny vy mainty Barrel NipplePipe Fitting Nipple
Ny nipples dia fittings ahitana fantsona fohy iray izay matetika omena kofehy fantsona. Hita any amin'ny faran'ny fampifandraisana azy ireo izy ireo. Ao amin'ny Leyon dia manamboatra pataloha vy vita amin'ny karbon izahay araka ny fironan'ny indostria na ny filan'ny mpanjifa.
Nipple fantsom-bolo mainty 1 santimetatra